android ဖုန်းများအတွက်သွေးခုန်နှုန်းကို SMS APP ကို ​​| APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » သွေးခုန်နှုန်းကို SMS (ဖုန်း / Tablet ကို / Web ကို)
သွေးခုန်နှုန်းကို SMS (ဖုန်း / Tablet ကို / Web ကို) APK ကို
သွေးခုန်နှုန်းကို SMS တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလေးအနက်ထားလှပသော, လာမယ့်မျိုးဆက်, SMS နဲ့မြန်ဆန်လုံခြုံ, သင်သာ want.Not နိုင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်စိတ်ကြိုက်အတူထုပ်ပိုးကြောင်း MMS ကို app ကို Pulse ဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးကို SMS App ကိုယင်း App ကိုသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့အတွေ့အကြုံကိုသင်၏ကိရိယာများအားလုံးဖြတ်ပြီး, ချောမွေ့စွာ, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျများမရရှိနိုင်ပါအောင်နေဖြင့်ပြန်လည်စိတ်ကူးပုံဖော်သည်။ SMS နဲ့ MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ, လက်ခံ, သင့်ရဲ့တကယ်ဖုန်းနံပါတ်ကနေ, ဘယ်နေရာမှာမဆို။
Google Play တွင်အဘယ်သူမျှမကအခြား app ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို, အင်္ဂါရပ်တွေ, အမြန်နှုန်း, ဒါမှမဟုတ်နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစည်းမှုကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခွင့်ကိုပြုမိစာပို့ထားသည်။
ဘာမှဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ app ကိုသုံးစွဲဖို့ဂရုစိုက်သည်မဟုတ်လော သင်သည်သင်၏ download, နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သွေးခုန်နှုန်းဖုန်းပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပြီး features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးယိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကအဘယ်အရာကို၏သေးငယ်တဲ့အရသာဖြစ်ပါသည် အဆုံးစွန်စာရိုက်အတွေ့အကြုံကို:
- မတူနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အရည် animations တွေကို
- အဆုံးမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်နှုန်း-စကားပြောဆိုမှုဆောင်ပုဒ် options များ
- Password ကိုကာကွယ်ပေး, ကိုယ်ပိုင် စကားစမြည်
- သင့်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူဝေမျှမယ် GIF များထံမှ Giphy
- အလိုအလျောက်မက်ဆေ့ခ်ျကို backup လုပ်ထားနှင့်အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုနှင့်အတူ restore
- ကို Preview ကို web links များ
- နာမည်ပျက်စာရင်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ Spam တွေကို
- အဆက်အသွယ်များ, သော့ချက်စာလုံးများနှင့်မောင်းနှင်မှု / အားလပ်ရက် Modes သာပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျောက်ဖြေကြားမှုများ
- dual-SIM ကိုထောက်ခံမှု (က Android 5.1 +)
app ကို၏ဝဘ်ဗားရှင်း၏ထိပ်တွင်, သွေးခုန်နှုန်းကို SMS တက်ဘလက်များအတွက်ဇာတိ apps များရှိပါတယ်, MacOS, Windows ကို, OS ကိုဝတ်ဆင်, Google က Chrome ကို, Firefox ကို, Linux ကိုနှင့်ပင် Android တီဗွီ။ ဒီမှာ screenshots များနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း၌ရှိသမျှသောအထဲက Check: https://messenger.klinkerapps.com/overview/
သင်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. နေတယ်ဆိုရင်, ငါသည်သင်ကသူတို့ကိုရရှိနိုင်စေရန်, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသိုလှောင်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ သင့်စကားဝိုင်းများအားလုံးခိုင်မာတဲ့သုံးပြီးမိုဃ်းတိမ်၌သိမ်းဆည်းထားသည် အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကို။ သင်သည်သင်၏ data တွေကိုထုတ်ပေါက်ကြားစိုးရိမ်ရန်နှင့်အဘယ်သူမျှသင့်အဘို့အ မှလွဲ. သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုနိုင်စရာမလိုတော့ဘူး။ Pulse နှင့်အတူသင်မှန် box ကိုထဲက, privacy နဲ့စိတ်အပိုင်းအစ get: https://messenger.klinkerapps.com/encryption.html
သွေးခုန်နှုန်းလုံးဝဖြစ်ပါသည် အခမဲ့ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့ - နှင့်အတူ ကြော်ငြာမပါ - အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်! အခြား devices ထဲကနေစာပို့နိုင်ရန်, သငျသညျ (ကခုနစျပါးသောနေ့ရက်အခမဲ့အစမ်းနှင့်အတူ) သေးငယ်တဲ့ကြေးပေးသွင်းကြေးသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအချိန်ငွေပေးချေမှုအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်:
$ 0.99 / လ
$ 1.99 / သုံးလ
$ 5.99 / တစ်နှစ်လျှင်
တစ်ဦးတည်းအချိန်ဝယ်ယူဘို့ဒါမှမဟုတ် $ 10.99
$ 40 - $ 60 အကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တစ်နှစ်လျှင်။ Pulse နှင့်အတူသင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအရ။
သွေးခုန်နှုန်းက Android အဘို့, ပထမဦးဆုံးစစ်မှန်တဲ့ iMessage ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီး, ဝန်ကြီးချုပ်က web နှင့်ကွန်ပျူတာစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်, setup ကိုတစ်ဦးလေပြေဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းကိုသငျသညျကိုအသုံးပြုကြပါပြီဘာမှမတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။
- ထိုအကြောင်းကြားစာအနေဖြင့်တဦးတည်းအချိန် password ကို codes တွေကို, ကူးပါ
- ထိုစကားဝိုင်းစာရင်းပေါ်တွင်ပွတ်ဆွဲလုပ်ရပ်တွေက Customize သို့မဟုတ်လုံးဝသူတို့ကို disable
- ရှည်ကလစ်နှိပ်, Multi-select လုပ်ပါ, menu မှမဖတ်ရသေးအဖြစ်မာ့ခ်စကားစမြည်
+ Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
သွေးခုန်နှုန်းကို SMS (ဖုန်း / Tablet ကို / Web ကို)
Privacy Messenger …
Mei: SMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ + AI အ